Baahida Uugu Weyn Ee Hargaysa Taal Waa Biyo La'aan
Baahida Uugu Weyn Ee Hargaysa Taal Waa Biyo La'aan
Friday March 24, 2017 - 16:40:07 in by Samiir Cabdi
Hargaysi waa caasimad ay ku noolyihiin tiro ahaan shacab lagu qiyaaso halmilyan iyo waliba nus, waxa ku gadaaman baahiyo badan oo ay dadkaasi la halgamayaan sidii ay u maarayn lahaayeen ,waxyaabaha nolasha u aasaasiga ah(basic needs), oo ay ka midyihiin hoyga, biyaha ,caafimaadka ,waxbarashada ,maceeshada dhuuniga oo cirka isku shareertay.
Baahida uugu weyn ee ilaa hadda cid ka hadashaa aanay jirin ,waa biyo la ‘aan baahsan; oo ay Hargaysi la soo daaladhacaysay tan iyo xukuumadihii kala duwanaa ee ina soo maray.
Hargaysi maanta 80/100 waxa ay cabtaa biyo aan nadiif ahayn , waliba sida ay ku helaan ay adagtahay, waxa ay ka shubtaan dameer layaal iyo booyado.
Caafimaad ka biyahaas maaha qaar la hubo, hasayeeshee sidii ay ku heli lahaayeen ayaaba adag, foostada biyaha ahi maanta waxa ay ka maraysaa ,magaalada Hargaysa 20000 sh(labaatan kun oo shilin) meelaha qaarna waa 18000shl , waa baahi aan masuuliyiinteenu aanay warba ka qabin.
Waxa ayaan daro ah in aad la kulanto hooyo uur leh oo riixaysa kaaryoon ay dhaaminayso biyo ,qof waayeel ah oo kuyuu ku jira xili habeenimo ah.
Wakaalada biyaha ee Hargaysi waxa ay dhagaha inagaga qaaday mashruuca biyo balaadhinta oo noqday, biciidkaan dili doono haragiisa qaado.
Waxa ay awoodi weyday in ay bal horta maaro u hesho ilaalinta iyo ka war haynta biyaha aan nadiifta ahayn ee dadka haysata, waxa ay ku guuldaraysatay in ay ogaato halka biyaha looga soo dhaamiyo shacbka ay masuulka ka tahay.
Waxa is weydiin leh goorma ayaa ay Hargaysi helaysaa biyo ku filan?
Mashruuca biyo balaadhintu goorma ayaa uu hirgalayaa?
Waxa uu soo socday lixdii sano ee ay xukuumadani jirtayba, warkiisu waxa uu umuuqdaa , maahmaahdii ahayd( maantana farbaan maydhayaa ha ii fadhiyo geelu).
Qof kasta oo muwaadin ahi waxa uu bixiyaa cashuur lagumana dhaafo waxa uu xaq u leeyahay in uu helo , dhamaan adeegyadii uu qarankiisa ku lahaa.
Waxa aan deganahay shakhsi ahaan goonaha magaalada waligay adeeg dawladeed maan helin, biyahu ha u horayaane.
Waxa ceeb inoogu filan inaga oo aan buuxin , daboolina baahiyihii bulshadeena in aynu maalinkasta isku dul haysano, muxaafid iyo mucaaridba.
Ma jiro xusbi kaliya oo inagala hadla baahiyaheena , waxa aynu ku mashquulsanahay ,wax ay ahayd marka aynu saldhigno , ee aynu haqabtirno dadka aynu ka masuulka nahay.
Waxa aan ku talin lahaa, inta qasabadaha leh ee ay biyahu usoo dhacaan afartii habeen mar, in laga qabto fooqyada taangiyada waaweyn samaystay ee dhexda u galay, intii yarayd ee afka loo cabi lahaa, dadka aan aqoon biyo wakaaladeedna in bal uugu yaraan laga warhayo biyaha ay cabaan, iyo sixirka ay ku cabaan.
Waxa aad u mahadsan booyad layaasha oo kaalin mugleh ka qaatay ,daboolida biyahii baahida weyn Hargaysi u qabtay.
Iyagana waxa aan leeyahay u naxariista umada aad u adeegaysaan, ganacsi ka sokow waxa aad gudanaysaan waajib idinka saaran bulshadiina.
Biyo la,aani waa nolol la’aan
Wakaalada biyahu bulshadii ay masuulka ka ahayd waa bilaa biyo,iyana afka ayaa ay qarsatay , indhahana waa ay ka daboolatay.
Qalinkii :maxamed xuseen jaamac(hal-adayg)